"Waa khalad!": Piers Morgan wuxuu xoojiyaa dhaleeceynta Meghan; ayuu sheegay in ay dadka isticmaalayso - TELES RELAY
ACCUEIL » kale "Waa khalad!": Piers Morgan wuxuu xoojiyaa dhaleeceynta Meghan; Waxa uu sheegayaa in ay dadka isticmaasho
"Waa khalad!": Piers Morgan wuxuu xoojiyaa dhaleeceynta Meghan; Waxa uu sheegayaa in ay dadka isticmaasho
Dhamaan dadka reer ingiriiska ah iyo mufasiriinta, Piers Morgan Ingiriis subax wanaagsan waa midka dhaleeceeya Meghan Markle.
Soo dheji by Morgan Piers (@thepiersmorgan) on Mar 19, 2019 at 11: 37pm PDT
Piers ayaa sheegay in isaga iyo Meghan ay ahaayeen saaxiibo, laakiin waxay "foori" isaga. Tan iyo markaas ka dib, wargeyska ayaa sameeyey eedeymo badan oo ka dhan ah Meghan, isaga oo sheegay in wax walba oo ay sameeyaan ay tahay kaliya bandhigga. Waxa kale oo uu ku andacoonayaa in Duchess kaliya ay ku jiraan kuwa ku haboon ee iyada (iyada oo xitaa wadaagay buundooyinka leh aabaheed iyo walaalkeed iyo walaasheed iyo walaasheed: yaa sidaas sameeya?).
😂😂😂 Markay noqoto actress ... pic.twitter.com/lSMEdIZOs5
- Morgan Piers (@piersmorgan) October 17, 2018
😂😂😂 Marka jimicsi ....
* QORSHAHA SOO SOCDA *
Meghan Markle oo ah saaxiibka aan saaxiibka ahay ayaa ah mujtamaca xaraashka ah ee kor u qaadaya oo ka soo jeeda doorka noloshiisa, waxana uu go'aaminayaa inuu dhaco. https://t.co/Xt7qvP6DX7 pic.twitter.com/S2povc8RMA
Meghan Markle oo ah gabdhihi hore ee gabdhaha ah ayaa ah haweeney aan caadi aheyn oo kor u qaadaysa bulshada. Waxay gashay doorka nolosheeda oo waxay go'aamineysaa inay soo jiidato waxkasta oo ay awooddo - taasina waa sababta keentay suntan Palace.
Weerarkii ugu dambeeyay, kooxda martigelisay ayaa xumaysay sharnimadiisii ​​marka la barbardhigo ereyadii hore.
Meghan waa "been ah" ayaa leh Piers
Ka hadlaya Nine News Australia, bixiyaha GMB mar kale noo sheeg in ra'yigiisa Meghan uusan waxba iska beddelin.
Posted by Meghan / Sofia / Victoria / Kate (@swedishbritishfamilyroyal) on Mar 28, 2019 at 1: 39pm PDT
Marka Deb Knight waydiisto inuu dhab ahaantii u malaynayo in Meghan uu yahay "khalad" iyo "wax walba waa la soo saaraa", sida uu horeyba u yiri, Piers ayaa ku jawaabay:
Waan ka xumahay inaan sheego, laakiin waxaan ka baqayaa inay noqon doonto.
Wuxuu markaas dib u soo xasuustay in ay "soo direen fariimo badan iyo emails" iyo in ay la kulmeen pub markii ay timid London. Waxay "si fiican u sheekaysanayeen dhowr saacadood", sida saaxiib walbo oo kale. Waxay ku heshiiyeen inay mar kale kulmaan, ka dibna ... Piers Marna marna ma maqlin Meghan.
Soo dheji by Morgan Piers (@thepiersmorgan) on Feb 3, 2019 at 10: 21pm PST
Fududeeyaha ayaa sii waday:
Ma jecla dadka sida u dhaqma sidaasi, waa wax qallafsan. Oo waxay i tusisay in, waxaan ahay cabsi, malaha wax yar oo riix ah. Inkasta oo dadka qaarkiis ay runtii jecelyihiin oo ay ku dhacaan dabinka farsamooyinkan, waxaan ka baqayaa in ay aragto iyada oo kaliya iyada oo ah jilaa dhar badan oo ilko ah oo isticmaala dadka ilaa ay ka gaarto kor. taas oo ah, guurka reerka boqortooyada, dabcan.
Si loo dhamaystiro ayuu ku daray:
Nasiib wacan Harry, Waxaan rajeynayaa inuu ogyahay waxa uu sameynayo ... Oo hadday dhammaantood qaldamaan, ha qaylinina - waxaan isku dayay inaan kuu digo.
Sida laga soo xigtay Piers, Meghan wuxuu saameyn xun ku leeyahay Harry
Piers ayaa sidoo kale u maleyneysa in saameynta Meghan ee Harry ay noqon laheyd mid xun.
Inkasta oo uu ku qanacsan yahay in ay ku guulaysatay in ay u noqoto xayawaankii hore ee aabe aabaheed, kooxda martida u ah waxay u maleyneysaa in Meghan uu ku soo rogay fikradaha maskaxda ee Harry fikradiisa ah in uu yahay mid shisheeye ah oo reer boqor ah, wuxuuna waxyeeleyn karaa muuqaalkiisa.
Ma ku raacsan tahay Piers?
Mashruuca Iskaashatada Iskaa Wax-gadashada ah ee iPhone-ka ee Xamxo 900